15 ငါ၏အ pornfree ခရီး ~ 8 နှစ်ပေါင်းထံမှအကြံဥာဏ်လေ့လာတွေ့ရှိချက် / အကြံပြုချက်များကို / အပိုငျးပိုငျး - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ငါ၏အ pornfree ခရီး ~ 15 နှစ်ပေါင်းထံမှအကြံဥာဏ် 8 လေ့လာတွေ့ရှိချက် / အကြံပြုချက်များကို / အပိုငျးပိုငျး
LINK - ငါ၏အ pornfree ခရီး ~ 15 နှစ်ပေါင်းထံမှအကြံဥာဏ် 8 လေ့လာတွေ့ရှိချက် / အကြံပြုချက်များကို / အပိုငျးပိုငျး
ကျွန်ုပ်၏ ၅ လတာကာလနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရာများနှင့်ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာများကိုမျှဝေချင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးတတ်ပြီးရှိသည်သို့မဟုတ်ပြန်သွားကြသည်ဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ် XY သို့မဟုတ် z လုပ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့, သငျသညျပြန်သွားကြသည်ရန်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
surfing တိုက်တွန်း ငါ့ကိုဤသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောသင်ခန်းစာဆုံးမသွန်သင်: သင်ကလာနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုသွားခွင့်ပြု, ထိုင်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ ခံစားချက်များကိုသာသူတို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကို attach ကဲ့သို့ခွန်အားဖြစ်ကြ၏။
အခါတိုင်းက5မိနစ် timer နေရာမှာထား, အနီးကပ်သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ပြန်သွားကြသည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမလိုလားအပ်သောအပြုအမူရရှိသွားတဲ့နှင့်ဘာမှလုပ်နေတာရပ်တန့်။ တစ်ကယ့်ကိုဆိုးရွားဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်အကြောင်းကိုခဲ့ကြောင်း, သင်တို့သည်စွမ်းအင်နှင့်အတူစိမ်းဖြင့်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်မသက်မသာခံစားမိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာ, သင်သည်သင်၏ယာယီမြင့်မားသောချွတ်လာနှင့် wow နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်
သငျသညျအစဉ်မပြတ်ရေရှည်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်ဘာလုပ်ဖို့ရှေးခယျြထက်ယခုနာကျင်မှု numbs ကြောင်းတစ်ခုခုရောက်ရှိရှိသော်လည်းအဆုံး၌ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်နိုင်ပါတယ်
စွဲလမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအားဖြင့်မကစားပါဘူး, မကယုတ္တိဗေဒကိုသုံးပါဘူး။ ဒါကြောင့်အတူကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ကြိုးစားနေရပ်တန့်။
ငါဖြတ်သန်းခဲ့သည့်ပုံစံနှင့်များစွာသောသူတို့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်သင်၏ရင်ဘတ်ကိုမာနထောင်လွှားကာနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည့်နောက်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုတော့တော့မည့်အကြောင်းသင့်လျော်သောဖော်ပြချက်များစွာကိုရေးခြင်းဖြစ်သည်။ စွဲသင်၏သင်၏ယူနန်ပြည်နယ်၏ယုတ္တိဗေဒဂရုမစိုက်ပါဘူး။ သင်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်မလုံခြုံမှုကိုနှစ်သက်သည်။
သငျသညျစွဲ mode ကိုပြောင်းရန်နှင့်ထိခိုက်ချင်သည့်အခါ, သင့်ကို wired ဦးနှောက်ဖွယ်ရှိအံ့သြဖွယ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တုံ့ပြန်မှု, ဒါမှမဟုတ်နေပါစေသူတို့ကိုသင်ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်လောက်ရိုးရိုးသားသားသို့မဟုတ်တိကျစွာ, အတိတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့၏ပင်မှတ်တမ်းများတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်
ကျနော်တို့မကြာခဏကြောင့်လို့ဆိုချင်ပါတယ်သို့မဟုတ်နာတာရှည်လျစ်လျူရှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ပြန်သွားကြသည်။ ရပ်တန့်-B ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ပျဉ်း9မှာကြည့်လိုက်ပါ။
Relapse တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပြီး, သုံးအဆင့်ဖြစ်ပျက်: စိတ်ခံစားမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
Relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ငါ relapse ၏ mechanics ရဲ့နားလည်ရန်လိုအပ်သောကြည့်ရှုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တားဆီးဖို့ဘယ်လိုဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ relapse, ဒါမှမဟုတ် porn သုံးပြီးကျနော်တို့အစဉ်အလာတစ်ခု relapse ကိုပဌနာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်တာကို reset ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာနာတာရှည် Self-လျစ်လျူရှုအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်သည်အဘယ်အရာသည်။
အဓိကသင်ခန်းစာ - သင်၏ relapse လမ်းကြောင်းများ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုသင်ကာကွယ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
စူးရှသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ relapse ကာကွယ်ပေးနိုင်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဘို့အ Tools များပါဝင်သည်: တတ်ပြီး surfing / ဘာဝနာ,5မိနစ်အပေါ်အကူအညီတောငျး, ဘာမှအကြောင်းပြောဆိုရန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုခေါ်, relapse / ကျယ်ပြန့်အများပြည်သူမြင်ကွင်းထဲမှာတစ်ခုချက်ချင်းလမ်းလျှောက်သွားဘာမျှ timer နေရာမှာပြုပါ မှလွဲ. ဘာမှမလုပ်ပေး r / pornfree သို့မဟုတ်မည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အရင်းအမြစ်, etc
သူတို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစာရင်းပြုစုလို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်း - ရူပဗေဒဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကသင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာမင်းမှာရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ်
ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည့်အဖြေမှာအသက်ရှူခြင်း၊ အနားယူခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှေးခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းများပါဝင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်သိသောလူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများပြည်သူနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် ပြန်၍ မရနိုင်ပါ
Key ကိုသင်ခန်းစာ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ relapse ငါတို့သည်ငါတို့၏အရှိဆုံးအားနည်းချက်မှာလုပ်ကြောင်း, မကြာခဏရွေးချယ်စရာတစ်ခုမကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်
ဒါကြောင့်ပင်အစားအော်ဂဇင်၏, အပြုသဘောအပြုအမူတွေကိုလှည့်ပတ်သည်သင်၏ဘဝများအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်မတိုင်မီ relapse တားဆီး။
ငါသင်ယူခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကငါဟာတိုးတက်မှုမရနိုင်တာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက orgasm ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစည်းရုံးနေတုန်းပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတုန်း၊ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမလုပ်နိုင်အောင်အရာအားလုံးကိုပြန်စီစဉ်ပေးတယ်၊
ကျွန်တော့်အတွက်အကျိုးရှိစေသောရေရှည်တည်တံ့မည့်အစီအစဉ်မှာကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်သောအရာများ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေသောအရာများပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြန်လည်စီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါ့အတွက်တော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့၊ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူနေဖို့၊ ဝါသနာတွေ၊ တစ်ခုတည်းသောကစားသမားဗီဒီယိုဂိမ်းတွေအတွက်အချိန်အများကြီးရဖို့ငါ့အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးတယ်။
သို့ပြန်သွားရန်ငါစတင်ခဲ့အခါ, relapse အဖြစ်မကြာမီငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖြစ်စတင်; အစဉ်မပြတ်ငါချက်ချင်းကွန်ပျူတာကိုဖွင့်, ပြီးတော့ဒါပေါ်မစား showering နှင့်တူသောအခြားအလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြိနျမဆှဲလိမ့်မယ်။ ရုံကိုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ရတဲ့ပေါ်မှာလုပ်နေတာ၏လုပ်ရပ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သည်, ငါငါလုပ်နေတာရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ငါလည်းအိပ်မပျော်ဘူးလို့ညည်းညူခဲ့ဖူးပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးလို့လည်းညည်းညူခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးကိုကျွန်ုပ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သောရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုဖွင့်ရန်အချိန်မယူမီ (သို့) အပန်းဖြေအနားယူခြင်းမပြုမီ၊ အိပ်ပြီးမသွားမီသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သွားတိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုံးဝလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာနောက်ဆုံးအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အနားယူအချိန်အများကြီးပိုပြီးလျှော့ပေါ့စေသည်။
ပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်သောအခါပြtheနာ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသာကြည့်ပါ၊ အချို့သောအခြေအနေများကသင့်အားရှုံးနိမ့်မှုအတွက်သတ်မှတ်ပေးသည်ဟုသင်တွေ့ရှိကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မအိပ်တာကကျွန်တော့်ကိုပြန်ကောင်းလာစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါဟာတစ်ကိုယ်တည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိယားယံတာကိုတွေ့တော့ငါနည်းနည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အပန်းဖြေအနားယူခြင်းမတိုင်မီလိုအပ်ချက်အားလုံးပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချက်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ သင်ပြောင်းလဲချင်သောအရာကိုပြောင်းလဲရန်မိမိကိုယ်ကိုပြောခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုထင်ဟပ်ခြင်းကဤနေရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
သငျသညျ 90 ရက်ပေါင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသူစဉ်းစားပါ, သင်အခုကြောင့်လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်။
90 ရက်ပေါင်း, ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲမှတ်တိုင်, အားလုံးဝေဒနာတွေသင်တို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းစေတဲ့မှော်အရေအတွက်ကိုဖြစ်သွားသည်မဟုတ်ကစသည်တို့ကို PIED, စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ED, ဖြစ်
flatline သို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအချိန်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားမကြာခဏ 1 သို့မဟုတ်2လအတွင်း pornfree ၏နိုင်ရန်အတွက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအကူအညီနဲ့ထွက်သည်အထိအာရုံစိုက်အရေးယူမှုလိုအပ်ပါသည်နှင့် Self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကျော်လွှားရန်သော်လည်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်အခြားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ဖတ်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ, Self-ယုံကြည်မှုတူ, porn နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ထုံနိုင်စွမ်းမရှိဘဲအသက်ရှင်ရန်သင်ယူခြင်းကနေလာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ရူပါရုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုအခမဲ့ run ပါစေနှင့်ယနေ့ကြောင့်လူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ကွိုးစားများနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှေ့ဆက်ရွေ့လျား
ကုထုံးသည်၎င်းကိုရွေးချယ်လျှင်၎င်းသည်အတိတ်ကစိတ်ဒဏ်ရာကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဖြေရှင်းနည်းကိုလေ့လာရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။
အလေးအနက်ထား, အကူအညီတောင်းထွက်ရောက်ရှိဖို့။ ဒါဟာအစွမ်းသတ္တိ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအသိအမှတ်မပြုသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့သင်ယူခြင်းဟာအခြေခံကျနာလန်ထူကျွမ်းကျင်မှု, ငါနှစ်ပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
ငါဆိုလိုတာတစ်ခနှင့်အတူအစဉ်အလာရပ်တန့်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: ငါဆာငတ် Angry, Lonely, မောပန်းခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကုန်နေသောဖြစ်ကြောင်းကို? သင်တစ်ဦး relapse လာမယ့်ခံစားမိတိုင်းသင်ကရပ်တန့်-B ကိုမဆိုဖြစ်ကြပါလျှင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး, သင်တခြားဘာမှလုပ်မီ, ပထမဦးဆုံးသူတို့အားဖြေရှင်းရန်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအကင်းပါးပါးသိရန်နှင့်သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်သင်ယူပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသည်မည်သည့်အတိုင်းအတာပင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်လုပ်ဆောင်ပါစေ၊
တခါတရံမှာ HALT-B ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသင်မဖြေနိုင်လောက်အောင်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ဤကိစ္စတွင်သင်မည်သည့်အတွေးနှင့်မည်သည့်အရာကိုမစဉ်းစားဘဲနေပါစေပြန်လည်အသက်သွင်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုသေချာစွာသင်သိသည်။ သင်ပြန်လည်နေရာချထားရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်နိုင်မည့်ပိုမိုကောင်းသောနေရာတစ်ခုသို့သင်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ် ဦး ထံမှအကူအညီတောင်းပါ။
ငါရပ်တန့်, အစီအစဉ် B ကခေါ်မှကြိုက်တယ်! အဓိကအားဖြင့်ငါဖြစ်လိုလျှင်အရေးပေါ်အစီအစဉ်နှင့်အတူယခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီဖို့ရန်ရွေးချယ်နိုင်မယ့်သတိပေးချက်အဖြစ်။
အပြုသဘော, ရွေးချယ်မှု-အာဏာအပ်နှင်းစကားလုံးများကို အသုံးပြု. အနုတ်လက္ခဏာဘာသာစကား Reframe: ငါလိုခငျြ, ငါသည်ရှေးခယျြ
အလွန်အရေးကြီးသောဘာသာစကားသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများကို“ အလိုမလိုက်စားသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ရန်လိုသည်”; "ငါ X အချိန်မှာအိပ်ရမယ်"; “ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်တာကြောင့်ငါတို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမဟုတ်ဘဲပြန်လည်နာလန်ထူမှုဟာကုန်းမြင့်တဲ့တိုက်ပွဲကိုဖြစ်စေတယ်။
နှစ်သက်သောလုပ်ရပ်များကို“ I want” နှင့်“ I select” ကို အသုံးပြု၍ အပြုသဘောဆောင်သော၊ ဥပမာအားဖြင့် - ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုငြင်းဆိုရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည် (ထို့နောက် HALT-B ကိုစစ်ဆေးပါ။ ) ငါကအခမဲ့ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကတခြားသူတွေအတွက်ရောငါ့အတွက်ပါငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ပဲ။
သင်ရုန်းကန်နေရသည့်အခါတိုင်းသင်ပြောသောအရာကိုလေ့လာပါ။ အရေးကြီးသောအသံများကို အသုံးပြု၍ သင့်ကိုယ်သင်ရိုက်နှက်လေ့ရှိသည် -“ ငါဒီလိုလုပ်သင့်တယ်။ ငါဒီလုပ်နေခံရဖို့ရှိသည်။ ငါဒီလုပ်နေခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ " သင်ဤအရာကိုသတိပြုမိပါကသင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အရာကိုစဉ်းစားပါ၊ ထို့နောက်ပြောပါသို့မဟုတ်ရေးပါ။ “ အိုကေဒါငါ့အကျင့်ဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငါရေချိုးပြီးရေလိုချင်တော့ဒါကငါလုပ်ပေးမှာပါ” အဓိကအချက်ကအဆိုးမြင်သံသရာတစ်ခုမှာဆက်နေမယ့်အစားသူကသင့်ကိုရှေ့ကိုလှည့်ပတ်သွားစေပြီးလွတ်မြောက်စေတယ်။
သင်ဤထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ပါကပထမဦးဆုံးမှာအလွန်အဆင်မပြေခံစားရပေမည်။ ငါဒါအရာအားလုံးကိုကိုယ်အဘို့တက်ရိုက်နှက်နှင့်လက်တွေ့စံချိန်စံညွှန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုင်ထားရန်အသုံးပြုခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာငါ့အဘို့ပြုလေ၏။ လိုတူသောရွေးချယ်မှု-enable စကားလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရှေးခယျြကြောင့်သံသရာကိုချိုးဖျက်နှင့်အစားအရှိဆုံးသင်ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကူညီပေးသည်။
တစ်ကြိမ်မှာရည်မှန်းချက်ကိုအာရုံစိုက်, နှင့်မျှမတို့ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့, သင်လုပ်ကိုမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တိုးတက်မှုဆင်နွှဲ။
ကျနော်တို့အမြဲတမ်း 100% ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်, ထိုအဆင်ပြေ! အသည်းကွဲခြင်းသည်ဘဝကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်စေသည်။ အရာရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းမသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပျက်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်သည်ထက် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတစ်ကြိမ်တွင်တစ်ရက်အားသန်ရန်အမြဲရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒါဟာကောင်းသောအလေ့အထများကိုတည်ထောင်ရန်ခဏယူနိုင်ပြီးမကောင်းတဲ့သူတွေကို၏သင်ကိုယ်တိုင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်။ သင်တို့မူကားတိုးတက်မှုသငျသညျကွိုးစားပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ရမည်။ ဒါဟာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောတိုးတက်မှုဖြစ်စေ 8 နှစ်ပေါင်းငါ့ကို ယူ. , ယခုငါသည်ငါ့ခါးပတ်အောက်တန်းအတွက်လပေါင်းများစွာ pornfree ရှိသည်။ ကံကောင်းတာကအများစုလူတို့အဘို့, တိုးတက်မှုထက်အများကြီးမြန်ဖြစ်ပျက်🙂
လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအသောက်, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအချိန်ယေဘုယျကျန်းမာရေးငါ၏တိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျအလွန်သေးငယ်သောခြေလှမ်းများနှင့်အတူတစျဦးစီအတွက်တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်: နေရာတွေကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လှေကားယူ (ဒီရေတွက်!) နှင့်တဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ကိုတက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အစားအသောက်များတွင်အဘို့, ကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ် junk အစားအစာ, ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းအစားအစာများထည့်သွင်း။ အိပ်စက်ခြင်းများအတွက်: လျှော့ချခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်မျက်နှာပြင်အချိန် 2-3 နာရီအိပ်ရာအချိန်ရှေ့၌၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီနေ့ကတစ်ချိန်တည်းတစ်ဝှမ်းအိပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ လူမှုရေးအကြိမ်: မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်ကြိုးစားသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်တဦးတည်းကိုချစ်တော်မူ၏ ငါတောင်လူကန်လန်အဖြစ်, ထိုကာလကယ့်ကိုအကြှနျုပျကို reset နှင့်ပျော်ရွှင်နေဖို့ကူညီပေးသည်ကြောင်းရှာပါ။
ကျွန်တော့်ဇနီးကဒါကိုမကြာခဏပြောလိမ့်မယ်။ သင်အမှန်တကယ်တစ်ခုခုလုပ်လိုပါကသင်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အရာအားလုံးကိုစီစဉ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာများအတွက်အချိန်ပေးပါ။
လျှောက်လွှာတစ်ခု - ငါတကယ်အိပ်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ည ၈ နာရီခွဲလောက်မှာဖန်သားပြင်အားလုံးကိုပိတ်ပြီးမီးတွေကိုမှိန်သွားအောင်လုပ်မယ်။ ငါဒီအချိန်မှာငါလုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်၊
သင်၏ဘ ၀ ၌အပြုသဘောဆောင်သောမီးပြတိုက်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီး၎င်းကိုအချိန်ယူပါ။ ၎င်းသည်ချာ့ချ်သို့မဟုတ်ဝါသနာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောအချိန်ဖြုန်းနေခြင်းကြောင့်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ရွှင်လန်းစေနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အချိန်သည်ကောင်းမွန်သောဘဝတွင်နေထိုင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်ကိုနားလည်ပါ။ ထို့ကြောင့်အချိန်ယူပါ။
ဤသည်ကိုလက်မခံဖို့ကျွန်မကိုခဏယူတဲ့ cheesy တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တကယ့်ကူညီပေးသည်။ relapse ရဲ့အစွန်းမှာဖြစ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်တကယ်မကူးမသွားမည်မဟုတ်များအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်မလွှတ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသောအချိန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး 100% ဖြစ်ခြင်းမကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်ကိုသည်းခံကြလော့။ fuck ဆိုတဲ့ကသင်တဦးတည်းတွေ့ဆုံခဲ့သောကွောငျ့သာ, သင်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ 1 /5တွေ့ဆုံဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်မလွှတ်! အမှန်တရားမှာသင်ဖြစ်နိုင်သငျသညျပေါ့ပေါ့ယူပြီးနေကြသည်လူတွေကိုတစ်ခုလုံးသူကပြောတယ်အများကြီးအရေးပါနှင့်ရိုးသားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာ့အထဲတွင်သင်နှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တစ် fuck ဆိုတဲ့-Up နဲ့တူခံစားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်ကိုသည်းခံကြလော့။ သင်ကတန်ဖိုးရှိကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်မလွှတ်နှင့်မစုံလင်မှုပဲသင်ပင်ပိုကောင်းဖြစ်လာနိုင်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။
သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ (သို့) သင့်ဘဝရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့အရာတွေ၊ လူတွေကိုစာရင်းပြုစုဖို့ကြိုးစားပါ။ ၎င်းသည်“ ယနေ့ငါထသည်” ကဲ့သို့ရိုးရှင်းနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်တာကမင်းရဲ့ဘဝဟာမဆိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်သဘောပေါက်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရက်အနည်းငယ်တိုင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေ့ကျင့်ခြင်း (နေ့တိုင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ) သည်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာအောင်ပွဲခံရန်ကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာသည်ကျွန်ုပ်ကိုအောင်မြင်စေလိုကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုမလိုချင်သည့်အချိန်၌ပင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ရန် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်တဲ့လူတိုင်းကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်။
ဒါဟာတဦးတည်း, ငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ပိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါသည်သင်တို့နေသောလက်ခံနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်သောကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
သင်တို့သည်နောက်ကိစ္စမည်သူမဆိုပြောပါတယ်သို့မဟုတ်သမျှကိုသင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါအဘယျသို့, ချစ်ခြင်း, လေးစားမှု, ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုထိုက်ဖြစ်ကြသည်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုလွန်းသည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းသင်၏အသက်တာရှိလူများရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။
ငါပြောပြီးပြီငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြန်လုပ်ရမယ်။ တိုးတက်မှုဆိုတာတိုးတက်မှုပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ရင်တောင်သင်အရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုကောင်းတယ် (ဒါကငါ့အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ) ။ သုံးနာရီသန့်ရှင်းခြင်းသည် ၁ နာရီထက် ပို၍ ကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းဖြစ်ရပ်မှန်) ။
ဤအဆင့်အထိသင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတိုးတက်လာပုံနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်အကြံဥာဏ်များသည်ပြန်လည်ဆယ်တင်ရေးမှတ်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော်မကြာခဏ log မလုပ်ပါနဲ့; ပြောင်းလဲမှုကိုရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများတွင်ယူနစ်ထက်နေ့စဉ်တွေ့ရသည်။
ငါသည်ဤမည်သူမဆိုမှအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျချဉ်းကပ်မှု၌ပြောင်းလဲမှုများကိုအကျဉ်းချုံးထားသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါအဲဒါကိုဖြည့်စွက်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအနာဂတ်မှာဒီအရာတွေကိုနောက်တစ်ခုငါလုပ်မယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမင်္ဂလာ